Kalluunka Methyltrienolone budada (965-93-5) hplc = 98% | Lacagta Fatahaada AASraw
/ Products / Xabbad dufan leh / Budada Methyltrienolone
Rating: SKU: 965-93-5. Category: Xabbad dufan leh
AASraw wuxuu la leeyahay karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga budada Methyltrienolone (965-93-5), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Budada methyltrienolone waxaa kale oo laga yaabaa inuu noqdo midka ugu adag ee cuncunka iyo cuncunka ee dhammaan steroids. Methyltrienolone waxay u baahnayd qiyaaso aad u yar si loo arko guulo waaweyn iyo xajmiga. Methyltrienolone ma badalo si estrogen, laakiin waxay leeyihiin dhaqdhaqaaqa progestational oo kordhin karta saamaynta estrogen.
Fiidiyowga budada methyltrienolone
Budada methyltrienolone aasaasiga ah characters
Name: Budada methyltrienolone
Qaaciddada Molecular: C19H24O2
Miisaanka kelli: 284.39
Dhibcaha Biyaha: 206-209 ° C
Color: Cad udub budada ah ee cadceedda ah
Root Methyltrienolone isticmaalka budada ee wareegga steroids
Budada Methyltrienolone waxaa sidoo kale loo yaqaan Metribolone (CAS 965-93-5), MT.
Isticmaalka budada mastiin methyltrienolone
Milatariga 0.5 (mgs) ilaa 5mgs maalintiiba ayaa loo kala qaybiyey qiyaasta, oo aan ka badnayn 3 illaa 4 usbuucii isticmaalka.
Digniin ku saabsan mastar dufanka Methyltrienolone
Dufanka methyltrienolone waa budo aad u badan oo waxay u badan tahay inay keento timo lumis iyo finan daran oo ku dhaca kuwa u nugul saameyntaas. Waxaa jira halis loogu talagalay ginecomastia sababtoo ah saameynta progestational ee budada cayriin Methyltrienolone. Walaaca ugu weyn ee budada cayriinka ah ee Methyltrienolone waxay u badan tahay inuu ku sumoobo beerka.
Dufanka methyltrienolone (MT) wuxuu dhisaa murqaha iyo duxda gubashada. Iyo steroid oo si adag u xirta AR-ga ayaa kicin doona qalab badan oo muruq ah oo gubi kara duf badan. Laakiin waa wax aad u macquul ah, oo macquul ah oo sun ah, steroids aan lahayn.
Methyltrienolone budada cayriin (CAS 965-93-5)
Amarka weyn (1kg gudahood) waxaa loo diri karaa 3 maalmood oo shaqo kadib bixinta.
Suuq-geynta Mastarotienolone Suugaanta
Sidee si ay u iibsadaan budada Methyltrienolone (CAS 965-93-5) ka AASraw